Omume ọjọọ na omume mkparị
N'ịbụ onye nọ n'ime ọha mmadụ, mmadụ aghaghị irube isi n'ụkpụrụ niile a nabatara. Ogoro nke o gosiputara na nke a, bu ihe omuma nke omenala ya. Ọ bụrụ na ịhapụ ihe ndị a nabatara, a ga-akpọ omume ya dị ka onye na-abaghị uru ma ọ bụ nke dị njọ, na-eme ihe - onye omempụ na, dịka a na-akpọ ya, na-eme mkpesa.
Omume ọjọọ na omume rụrụ arụ nke mmadụ
Ụdị omume abụọ a dị iche na nke ahụ:
nke mbụ - dịtụ, n'ihi na ọ na-ezo aka n'ụkpụrụ nke ọdịbendị nke otu otu;
Nke abụọ bụ nke zuru oke n'ihe metụtara ụkpụrụ nke steeti ahụ setịpụrụ.
Maka nghọta doro anya nke echiche abụọ a, ka anyị nye ihe atụ. Ndị na-apụnara mmadụ ihe n'okporo ámá na-atụle nke a n'onwe ha, ka anyị kwuo, ọrụ, ụzọ ha si eme ego, ma ọ bụ, dịka Robin Hood nke oge anyị, na-alụ ọgụ, ya mere, maka ikpe ziri ezi n'ime ọha mmadụ. Ma enwere iwu iwu, dị ka nke a ga-esi mee ihe a dị ka mpụ, nke a abughizi nkewa (omume ọjọọ).
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dị njọ (ihe ntụgharị) - omume niile nke megidere ihe ndị a na-atụ anya ya, ụkpụrụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ọtụtụ afọ mepụtara na otu òtù mmadụ na omume rụrụ arụ, nke a na-ewere dịka ọdịiche dị n'etiti ọha na eze.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere nke a na nkọwa ndị ọzọ, mgbe ahụ:
Okwu "omume ọjọọ" na-ezo aka n'omume nke onye ahụ na-akwadoghị, ya bụ, ndị na-agbapụ n'iwu ndị e guzobere na otu mmadụ, ma na-etinyekwa ndụ n'ọrụ, ọdịmma, usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya egwu. Na mmekorita mmadu, omume onye di otua bu onye na-adighi nma. akpọ nke a na-achịkwa, a na-achịkwa àgwà nke ụdị a, ọ bụ site na iwu iwu, iwu, omenala. Ulo mmadu na-agbasi aka ike ma na-acho ime ka ihe ojoo ndi mmadu ghara ime. Okwesiri iburu n'obi na ihe kpatara ihe onye omempia ji eme ihe bu ihe agha nke onwe ya na ndi mmadu.
Ọ bụrụ na iwu kwadoro n'echiche nke omume rụrụ arụ, mgbe ahụ, iwu na ụkpụrụ omume dị iche iche dị na ya, ma na nke a, ndị mmadụ dị njikere iji nweta ụzọ dị iche iche iji mezuo ihe a chọrọ. Ndị dị otú ahụ na-abụ ndị omempụ ma ọ bụ ndị omempụ.
N'iji ntụrụndụ aka aka
Overestimated ùgwù onwe onye
Nchoputa nke ịmụ nwa
Mbelata na ịda mbà n'obi
Esemokwu nke Onwe
Akwụkwọ na psychology nke mmekọrịta
Nkwenye maka ụmụ nwanyị
Ego ole ka esi esi nri maka nwa?
Ụdị kachasị nke nwamba
Embassy nke Denmark na Russia
Kuki na ụdị Mediterranean
Atụmatụ maka ịse foto n'oge oké osimiri
Ụtọ peas - na-eto site na osisi
Maritime agbamakwụkwọ - mma
Ifuru Kalanchoe - ọgwụ Njirimara na ngwa na ndiife na nkà mmụta ọgwụ
Fan na batrị
Utu maka ihe nfe
Foto dị egwu nke Naomi Campbell dị afọ 46 na-ebipụta magazin W Magazine
Nri nri na nri
Iggy Azalia na magazin a bu "Mbido"
Beshbarmak si ọkụkọ
Kedu otu esi ewusi ebe nchekwa?